ကျန်းမာရေးသုတ Archives - Page 82 of 93 - Latest Myanmar News
ခြေလက်ထုံကျင် ရောဂါအတွက် အကြောတစ်ထောင်ပင်
June 13, 2020 by Latest Myanmar News
အကြောတစ်ထောင်ပင်(သို့) ဘားကြောပင် ကျွန်တော်သည် ခြေလက်ထုံကြင်သောရောဂါဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ နားလည်သောသူများကဆေးလိပ်အလွန်အကျွံသောက်သောကြောင့် သွေးကြောပိတ်ချင်သည်ဟုပြောပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင်ပို၍ဆိုးရွားပါသည်။ လိမ်းဆေးများလိမ်းသော်လည်း မပျောက်ပါ။ အကြောတစ်ထောင်ရွက်ကိုတစ်ခါစားတစ်ရွက် တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် ဒီတိုင်းဝါးစားသောအခါ အံ့သြစရာကောင်းအောင်ရက်ပိုင်းအတွင်း ပျောက်ကင်းသွားပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် ၂ နှစ်ကျော်ခန့်ရှိပါပြီး။ ထပ်မဖြစ်တော့ပါ။ ထိုအရွက်ကိုတစ်ကြိမ်ထဲတွင်များများစား၍မရဟု တတ်ကျွမ်းသော ဆရာများကပြောပါသည်။ လူအပေါင်းတို့၏အကျိုးကိုမျှော်ကိုး၍တင်ပြလိုက်ပါသည် ။ Item Name Cart-Track plant(အကြောတစ်ထောင်ပင် ခေါ်ဘားကြောပင်ခေါ်ဆေးကျော်ကြီးပင်) Category —– Raw Material ၊ Botany Term —– Plantago major Linn ၊ Species Family — Plantaginaceae အလွန်အေး၍ မြင့်မား သော တောင်ပေါ် အရပ် ဒေသ၌သာ ပေါက်ရောက်သည်။ ပြင်ဦးလွင် နှင့် အနီး တစ်ဝိုက် … Read more
လေငန်းရောဂါကြောင့် နှစ်ရှည်ပါးစပ်ရွဲ့နေ သူများအတွက်
နှစ်ချီလေငန်းနှင့်ပါးရွဲ့ ပါးစပ်ရွဲ့ သူများအတွက်ဆေးနည်း … … … ကြွေပုတ်အလုံး = ၁၀ လုံး မီးဖုတ်ပါ အက်ကွဲလာလျှင် အမှုန့်ညက်အောင်ထောင်းပြီး အမှုံ့ချယူပြီး လေးလုံးသောပုလင်း ( သို့ ) ဘူး ထဲထည့်သိမ်းထားပါ ။ လေငန်းနှင့်ပါးရွဲ့ ပါးစပ်ရွဲ့သူအားလူးမည့်အချိန်တွင် အထက်ပါ ဆေးအမှုန့်ကို လိမ်းရမည့် အနေအထားကို အကြမ်းပုဂံလုံးထဲသို့ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ပရုပ်နှင့် မှင်သော်ကိုလည်း သင့်တင့်အောင်မှန်းပြီး ရောစပ်ထည့်ပါ ။( မှင်သော်ကို အမှုန့်ထောင်းပါ ) ထိုသုံးမျိုးရောစပ်ထည့်ပြီးလျှင် ရှောက်ရည်တခြမ်းခန့် လိမ်းလောက်ရုံ ညှစ်ထည့်ပါ ။ ထိုအခါ ဆေးရည်မှာ ဆူပွက်လာပါလိမ့်မည် ထိုဆေးရည်အား လေငန်းရောဂါဖြစ်နေသော နေရာအား ပြန်တည့်အောင်ဆွဲလူးပေးပြီးလျှင် ရှောက်သီးတစ်လုံးဖြင့် အလိုက်သင့်ပြန်ဆွဲပေးရပါသည် ။ လေငန်းရောဂါဖြစ်နေသော မေးရွဲ့ ပါးရွဲ့ … Read more
June 12, 2020 by Latest Myanmar News
အဆုတ်ရေ၀င်တယ်ဆိုတာဘာလဲ – Pleural Effusion အဆုတ်ကို လေ၀င်တာရှိတယ်၊ ရေ၀င်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုိဝင်လာတဲ့ရေထဲမှာ ပိုးပေါက်တာလည်း ရှိပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်တော့ အဆုတ်ထဲ ရေ၀င်တဲ့အခြေအနေလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အဆုတ်ရေ၀င်တယ်ဆိုတာဘာလဲ – Pleural Effusion ကျွန်တော်တို့ ရင်ခေါင်းထဲမှာ အသက်ရှူတဲ့လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အဆုတ်ဆိုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီ အဆုတ် နှစ်ခြမ်းရဲ့ အပြင်မှာ အလွှာနှစ်ခုနဲ့ ကာရံထားပါတယ်။ အလွှာ နှစ်ခုကို Pleura လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အလွှာ နှစ်ခုကြားမှာ ပုံမှန်ဆို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာပဲ ရှိတဲ့ အရည်ပမာဏ ရှိပေမဲ့ ရောဂါတစ်ခုခု ၊ အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့် ဒီအလွှာ နှစ်ခုကြားမှာ အရည်တွေ ပိုဝင်ရောက်လာတဲ့ အခြေအနေကို အဆုတ်ရေ၀င်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ … Read more
ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့သူတောင် ကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ ဖလံတောင်ဝှေး
ဆီးအရောင်နီခြင်း မဲခြင်းအတွက် ဖလံတောင်ဝှေး နဲ့ထန်းလျက် ပြုတ်သောက်ခြင်း ခုအချိန် မိုးရာသီ ဖလံတောင်ဝှေး ၅၀၀ ဘိုးဆို ၃ ပင်ရောင်းသူ ၅ ပင်ရောင်းသူ နဲ့ ဝယ်လို့ရနေတဲ့အချိန်ပါ ။ အိမ်မှာ ခေါင်းတခါကိုက်ရင် ၂နာရီ ကြာပြီးရင် ဆီးအညို ကိုခက်ခဲစွာ စွန့်ထုတ်ရတဲ့ သားလေးအတွက်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပါ ။ ဖလံတောင်ဝှေး ၃ ပင်ကို အပိုင်းပိုင်း ခုတ်ထစ်ပါ – အရွက်ရော ပင်စည်ပါ (ရောင်းသူတွေဆီမှာ အမြစ်နဲ့ ပဉ္စငါးပါးမရပါ) ရေဆေးပါ အပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ ဖလံတောင်ဝှေးကို ပြားသွားအောင်ထုပါ( ရေပြန်မဆေးရ ) ထန်းလျက် ၃ လုံး နဲအတူ (ဆန် ၂လုံးချက် အိုး ) အိုးတခုတွင် ဖလံတောင်ဝှေးကို ထည့်ရေအပြည့် ထည့် … Read more
ဒရင်ကောက်ညွှန့်လေးများမှ ပေးသော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
ဒရင်ကောက်ပင်၏ အံ့ဖွယ်(၇) ချက် မြန်မာအခေါ် ဒရင်ကောက်ပင်( fiddlehead) ဆိုတာ နူးညံ့ပြီး အရွက်ရဲ့ထိပ်မှာ အခွေအလိပ်လေးရှိတဲ့ ဖန်းပင်တစ်မျိုးပါ ။သူ့ရဲ့ ပုံစံက ကြိုးတပ်တူရိယာတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့ (ဥပမာ-တယော) ရဲ့ ထိပ်ဆုံးက အဆင်တန်ဆာလေးနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ သူ့ကို အစို့အညှောက်လေးတွေ ထွက်ခါစမှာ ခူးယူစားသုံးနိုင်ပါတယ်။နွေဦးရာသီအစမှာ ဒရင်ကောက်ပင်တွေကိုပေါပေါများများ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။အညွန့်လေးတွေကိုခူးပြီး သုပ်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြော်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ လုပ်စားနိုင်ပါတယ်။ ဒရင်ကောက်ပင်မှာ ဗီတာမင်အေ၊ဗီတာမင်စီ နဲ့ omega3တို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ သင်မသိသေးတဲ့ ဒရင်ကောက်ပင်ရဲ့ အံ့ဖွယ်အချက် (၇)ချက်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ (၁) ဒရင်ကောက်ပင်ဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းရန် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှု သိပ်သည်းဆမြင့်တဲ့ ဒရင်ကောက်ပင် … Read more
ဗိုက်ပြည့်၊ဗိုက်ကယ် ၊ပင်ပန်းခြင်း ၊ဖျားနာကိုက်ခဲခြင်းတို့အတွက် နနွင်း၊နွားနို့ ဖျော်ရည်
June 11, 2020 by Latest Myanmar News
နနွင်း + နွားနို့ ဖျော်ရည် အကောင်းဆုံးအိပ်ယာဝင် relaxant အိန္ဒိယလူမျိုးတွေ မှာ အနောက်တိုင်း အရှေ့တိုင်း နိုင်ငံပေါင်းစုံနဲ့ မတူတဲ့ ဆေးဘက်ဆုိုိင်ရာ အယူဝါဒတွေ ကြွယ်ဝတယ် ။ သူတို့ဆီက ဆေးနည်းများစွာမှာ ထိပ်ဆုံးမှာ နံပါတ်တစ်နေရာ မှာ ရှိနေတဲ့ ဆေးတပါးကတော့ နို့နနွင်းပါပဲ ။ နနွင်းဟာ ခန္ဒာကိုိုယ်နာကျင် ပင်ပန်းခြင်း ၊ဖျားနာကိုက်ခဲခြင်း ၊ အလုပ်ပင်ပန်းခြင်းတို့ အတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်စာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဆစ်မြစ်ယောင်နေတာတွေရှိရင် ဆေးသောက်စရာ မလိုပဲ ပျောက်သွားမှာပါ ။ အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်နေတာတွေ အစာမကြေဖြစ်နေတာတွေ အတွက်လဲ အလွန်ကောင်းတဲ့ ဆေးတပါးပါ ။ ဘိုက်ပြည့်ဘိုက်ကယ်နေတာတွေ အတွက်တော့ နတ်ဆေးတပါးပါပဲ ။ တခါတလေ ဗိုက်ပြည့်ဗိုက်ကယ်တာနေရထိုင်ရခက်တဲ့ အပြင် လေးလံ … Read more
ရှားစောင်းလက်ပတ်စားရင် ရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ၁။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကိုလျှော့ချပေးခြင်း လူနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ လေ့လာထားတဲ့ လေ့လာမှုတွေမှာ ရှားစောင်းလက်ပတ်စားသုံးခြင်းကသွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကိုလျှော့ချပေးကြောင်း သိရပါတယ်။ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို အဓိက ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ အင်ဆူလင်ရဲ့ sensitivity ကို ကောင်းစေလို့ ဒီအာနိသင်ကို ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၂။ ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေခြင်း ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အရာတွေကို တားဆီးပေးတာမို့ အရောင်ကျစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ၃။ သွားကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း သွား ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို ဖျော်ကာ ပလုတ်ကျင်းခြင်းကသွားချေးကပ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ပါးစပ်ထဲက အနာတွေကို လျင်မြန်စွာ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ၄။ မှတ်ဉာဏ်အားကောင်းစေခြင်း စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို သက်သာစေပြီး မှတ်ဉာဏ်အားကို ကောင်းစေပါတယ်။ ၅။ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဓာတ်တွေ ပေါများခြင်း ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဓာတ်တွေပေါကြွယ်ဝတာမို့ အိုမင်းခြင်းကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ၆။အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်း … Read more
မရှော့ပင် မရှော့ပင် – Euonymus ၊ရုက္ခဗေဒအမည် – Euonymus Kachinensis Praia.၊မျိုးရင်း. – Celastraceae. မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ်တွင် အများဆုံးပေါက်ရောက်သည် – သဘာဝအလျှောက်ပေါက်ရောက်သည်။ အပင် ပုံသဏ္ဍာန် အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည် – အမြင့် ၁၂ ပေခန့်အထိ မြင့်သည် – အကိုင်းဖြာသည် – ပင်စည် – ခပ်မွဲမွဲ ညိုခြောက်ခြောက်အရောင်ရှိသည်။ အရွက် – ရွက်လွဲထွက်သည် – အရွက်မှာ ဘဲဥပုံမှ လှံစွပ်ပုံအထိရှိသည်။ထိပ်ဘက်ရှိ အရွက်များသည် အရင်းဘက်ရှိ အရွက်များထက် ပိုကြီးသည်။ ရွက်ထိပ်ချွန်ပြီး ရွက်ရင်းသွယ်သည် – ရွက်ညှာတိုသည် ရွက်နားညီ၍ ရွက်ပြားချောသည်။ အပွင့် ရွက်ညှာရင်းမှ တစ်ပွင့်ချင်းထွက်သည်. ပြား၍ သေးငယ်သော အဝါရောင် … Read more
သိမ်းထားသင့်သည့် မြန်မာ့ဆေးနည်းတို မှတ်စု
June 10, 2020 by Latest Myanmar News
အသုံးဝင်မည့်ဆေးနည်းတိုမှတ်စု နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းဖြစ်နိုင်ချေ…သွေးတိုးရှိသူ သွေးထဲကိုယ်လက်ထရောများခြင်း ကိုယ်အလေးချိန်များသူ စိတ်ကျဝေဒနာရှိသူ ကိုယ်လက်လုပ်ရှားမှုနည်းသူ တို့မှာဖြစ်နိုင်ချေများသည်။ မုန်လာဥမှာပါနိုက်ထရိုက် ဓာတ်ကနှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါများကုရာမှာထိရောက် သွေးတိုးကိုကျစေသည်။ ကမ္ဘာမှာ ၂၅ %အရွယ်ရောက်သူနှလုံးရောဂါဖြစ်/၂၀၂၅ မှာပိုများမည် ဗောက်သီးပင် ပဉ္စငါပါး၃ခွက် ၁ခွက်ကျိုသောက် နှလုံးရောဂါသက်သာပျောက်ကင်း ဆီးချိုသွေးချိုလည်းသက်သာပျောက်ကင်းစေည်။ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးပျောက်အောင် မနက်ခင်းမျက်နှာသစ်သွားတိုက်အပြီး.. ပျားရည်နဲ့သစ်ကျံပိုးခေါက်အမှုန့်ကိုဆတူရောမွှေထားတဲ့ရေနွေးနွေးနဲ့ပလုတ်ကျင်းပေး မျက်စိအားကောင်းစေဖို့အစိမ်းရောင်အပင်များကြည့်ဖို့လိုသလို အရွက်စိမ်းများ မျက်စိအားကောင်းစေရန်စားရန်လိုတယ်။မျက်စိမှုန် ,ဇက်ကြောတက်, ခေါင်းကိုက်ခြင်း ကင်းဝေးမယ်..( မိုးရာသီ အစိမ်းရောင်ကြည့် လျော့ပါ) ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း, ဟင်းနုနွယ်ရွက်, ကိုက်လန်, တရုတ်နံနံ, ပင်စိမ်း,ဆလပ်ရွက်, မုန်ညင်း. ,ကန်စွန်းရွက်,သံပုရာ ,ကီဝီသီး, ဇီးဖြူသီး,ထောပတ်သီး သဘောင်္သီး,ရွှေဖရုံသီး(အဝါရောင်ရှိသောအသီးများ) မကြာခဏစားပေးရန်။ ဝမ်းလည်းသွား,အန်လည်းအန်,ချမ်းလည်းချမ်း( အထက်လှန်အောက်ရှော) စဖြစ်တာနဲ့မြင်းခွာရွက်အစိမ်းထောင်းထားအရည်(သတ္ထုရည်)ချက်ခြင်းသောက်ပေးပါ။ ချက်ခြင်းပျောက်စေရန်..အကြားအာရုံ , မှတ်ဥာဏ် ,အမြင်အာရုံအတွက် ကောင်းစေရန် မြင်းခွာရွက်အရည်အဆင်သင့်အမြဲထား သောက်ပါ။ မျက်စိပါဝါချလိုလျင် ညအိပ်ရာဝင် တဇောင်းလက်ပတ် … Read more
အမြဲလိုလို နားကျပ်တပ်လေ့ရှိသူများအတွက် သတိပြုဖွယ်
နားကျပ်အမြဲ တပ်လေ့ရှိသူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ၁ – အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း(အကြားအာရုံပိုင်း နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ) ၂ – နား ပိုးဝင်ခြင်း ၃ – လေ လမ်းကြောင်း ပိတ်စေခြင်း ၄ – အကြားအာရုံ ခေတ္တ ပျောက်ဆုံးခြင်း ၅ – နားကိုက်ခြင်း ၆ – ဦးနှောက်ကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေခြင်း ၇ – အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်သည့် မတော်တဆမူ ဖြစ်ခြင်း ၁ – အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း( အကြားအာရုံပိုင်း နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ) Headphones သိုိ့မဟုတ် နားကြပ်ကိုသုံးတဲ့အခါ နားထဲသို့ အသံကတိုက်ရိုက် အနီးကပ် ဝင်ရောက်တာ ဖြစ်ပါတယ် – 90 Decibels ထက်ကျော်တဲ့ အသံ အတိုင်းအတာက အကြားအာရုံမှာနောက် … Read more